अब देशभर CCTV ले निगरानी गर्छ : DIG डा. राजीव सुब्बा Artha daily : Best Online Nepali news portal
नेपाल - चीन २० बुँदे सम्झौता : सुरुङमार्गदेखि रेलमार्गसम्म ( बुँदा सहित )
अर्थ डेली प्रकाशित: २०७६-४-२६ गते
नेपाल प्रहरी संचार निर्देशनालय प्रमुख DIG डा.राजीव सुब्बाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देशभर CCTV राख्ने काम भइरहेको बताएका छन् । उनले अब अपराध नियन्त्रणमा यसले ठुलो भूमिका खेल्ने समेत बताएका छन् । उनले समयक्रमसंगै प्रविधिमा पनि ब्यापक परिवर्तन भएकोले अबको युद्द भनेको साइबर वार हुने भएकाले साइबर सेक्युरिटी महत्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले नेपाल प्रहरीले पनि समय परिस्थिति अनुकुल परिवर्तन गरिरहेको बताए । उनले भने- नेपाल प्रहरीले अहिले नेपालमा नंया प्रबिधि p-25 ल्याउन लागेको छ । यो प्रबिधि हाल अमेरिकामा प्रयोग भैरहेको छ । यो प्रबिधि करिव तिन-चार महिनाभित्रमा नेपाल भित्रने उनले बताए । यो सुरक्षा मामलामा अत्याधुनिक प्रबिधि मानिन्छ । अहिले नेपाल प्रहरीले रोबोट समेत निर्माण प्रकृया थालेको छ । उत्त रोबोटको डमी समेत बनिसकेको छ । नेपाल प्रहरी संचार निर्देशनालयले हाल ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने गुरुजी एप समेत बनाएको थियो भने अहिले ट्राफिक प्रहरीले नै यो एप प्रयोग गरिरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी संचार निर्देशनालय प्रमुख डी.आइ.जि. डा. राजीव सुब्बाले नेपाल प्रहरीले केहि समय भित्रमा अत्याधुनिक प्रबिधि p-२५ भित्राउन लागेकोले नेपाल प्रहरी अहिले भन्दा झन् अब्बल बन्न यसले सहयोग गर्ने बताए । प्रबिधिको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी कुनै पनि देशको प्रहरी भन्दा कमजोर नभएको बताए । अहिले अमेरिकामा प्रयोग भइरहेको प्रबिधि नेपालले समेत प्रयोग गर्दैछ , उनले भने – चीनमा प्रयोग हुने प्रबिधि पनि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ ।
उनले सम्पूर्ण युवा-युवतीहरुलाई आफ्नो सर्टिफिकेट देखाउने भन्दा पनि आफ्नो क्षमता देखाउन आग्रह गरे । नेपालमा पछिल्लो समय साइबर क्राइम बढ्नुको कारण चेतनाको कमिको कारण भएको उनको भनाइ थियो । डा. सुब्बाले जागिर भन्दा पनि आफैमा केहि गर्ने सोच राखेर अघि बढ्न सबै युवाबर्गलाई आग्रह गरे ।
अर्थ डेलिका लागि DIG डा. राजीव सुब्बासंग बिनोद भट्टराईले गरेको कुराकानी थप भिडियोमा हेर्नुहोस्!
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एबं पुर्व गृहमन्त्री बुद्धीमान तामाङले अहिलेको अबस्थामा..